Author Topic: Namrata Shrestha - Photos and Profile (Read 186829 times)
« Reply #10 on: September 21, 2009, 07:54:37 AM »
namrata is unmarried yaar....married bhayer pani yastari aru sanga dhulai garda farak parcha but they have relationship and sex bhaneko pani ta naramro hoina god ko pala ma ta gariyeko thiyo yaar ajha temple haruma cut cut ko murti banayer publish gareko huncha yaslai ta sabile simple nai lincha ......it just happened janera ta gareko hoina hola mistake bhayo aaba yasailai thulo issue banayer usko career lai hamle karab garnu pani ta bhayenani....
« Reply #11 on: September 23, 2009, 05:29:36 PM »
She's justabitch.
« Reply #12 on: October 06, 2009, 07:12:21 PM »
"yeo SANO SANSAR ma Mero Euta Sathi Chha....................."
« Reply #13 on: October 08, 2009, 04:24:36 AM »
कसैलाई दोषको सीमासम्म मात्र सजाय दिनुपर्छ, नम्रताले आत्महत्या गर्ने सीमासम्मको अपराध गरेकी होइनन्। उनलाई माफी दिन सकिन्छ। - Anil Pandey
नम्रताप्रति निष्ठुरी बनेको समाज
सार्वजनिक व्यक्तित्व हासिल गर्नु स्वयंमा एक गर्वको विषय हो। राजनीतिक पार्टीका नेता हुन् वा चलचित्रका कलाकार उनीहरुको सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्छ। जस्तो, चलचित्र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको पनि थियो। सोही व्यक्तित्व केही मात्रामा किचमान चित्रकारको पनि थियो। तर अब सम्भोगलीलाका कारण उनीहरु दुवैको व्यक्तित्व भयानक सटमा परेको छ।
चार वर्षअघि नै विवाहबन्धनमा बाँधिएका काठमाडौंको स्युचाटार निवासी किचमान अर्थात डिजे तान्त्रिक र मेरो एउटा साथी छ की अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठको पूर्ण चेतना र सक्रियतामा तयार पारिएको सम्भोगलीलायुक्त भिडियो चलचित्र अहिले बजारमा छ। डिजिटल प्रविधिको पूर्ण सदुपयोग गर्दै उनीहरुको सम्भोगलीलाले विश्वका पचासौं मुलुक खासगरी जहाँ नेपालीको बस्ती छ, पहँुच बनाइसकेको छ। नेपाली पत्रकारितामा भने पुनः श्रीषा कार्कीको मार्मिक तथा कलयुक्त कथा दोहोरिने सम्भावना बढेको छ। जनआस्था साप्ताहिक अखबारले चलचित्र अभिनेत्री श्रीषाको नग्न तस्वीर प्रकाशित गरेका कारण उनले आत्महत्या गरेकी थिइन्, आज सञ्चारमाध्यमले यस घटनालाई आवरणकथा बनाएर उछाले पछि नम्रताले पनि श्रीषाकै बाटो अपनाउने त होइनन् भन्ने त्रास बढेको छ।
सम्भोगलीला, यौनउत्तेजना र अश्लील चलचित्र तथा तस्वीरका जति सन्दर्भ बाहिर आएका छन् त्यसले महिलालाई नै अत्यधिक असर पारेको छ। उनीहरु जीवन त्याग्नसमेत विवश भएका छन्। तर गम्भीर पक्ष के छभने सम्भोगलीला स्त्री एक्लैले सम्भव हुँदैन, त्यसमा पुरुष अझ बढी सक्रिय रहेको हुन्छ। तान्त्रिकनम्रता भिडियो प्रकरणमा किचमान नै बढी सक्रिय देखिन्छन्। तर नम्रता मृत्यु अँगाल्ने विन्दुमा पुगेको समाचार बाहिर आइसकेको छभने किचमानको किच्चकपन स्वाभाविक बन्ने सेत पाइसकिएको छ। नम्रतालाई क्यामेराका अगाडि नङ्ग्याउनुअघि पनि उनी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रमाण प्रहरीले प्राप्त गरिसकेको छ। झण्डै ६७ वर्षअघि उनी न्युरोडस्थित मारबाडीको एक मोबाइलको पसल लुट्ने काममा संलग्न रहेको प्रहरीको रेकर्डमा छ, अखबारहरुले लेखेका छन्। यसरी हेर्दा सञ्चारमाध्यम जसरी नम्रताका पछिलागे, त्योभन्दा बढी तान्त्रिकका पछि लाग्नुपर्ने थियो। उनलाई पक्राउ गर्ने र कारबाही चलाउने पक्षमा सक्रिय हुनु आवश्यक थियो।
आज मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लागेको छ महिलाको उत्थानविना समाजको परिवर्तन हुँदैन भनेर राज्यले स्वीकार गरिसकेको छ। यस स्वीकृतिलाई व्यवहारमा उतार्ने होभने समाजको प्रभावशाली अंग प्रेस र सञ्चारमाध्यमले महिलालाई बढी पीडा पुर्‍याउने र पुरुषलाई गाईको दूधले नुहाउने पक्षपाती व्यवहार त्याग्नैपर्छ। यस यौनभिडियो प्रकरणको एकमात्र आपत्तिजनक पक्ष के मात्र हो भने नम्रता एक विवाहित पुरुषसँग प्रेम गर्न पुगिन्। प्रेममा सबै थोक जायज हुन्छ भन्ने दर्शन स्वीकार गर्ने होभने परपुरुषसँगको प्रेम र स्वयंसिद्ध यौनसम्बन्धका तरिकाहरुप्रति पनि आपत्ति जनाउनु आवश्यक छैन। यौनसम्बन्ध गर्दा सक्रिय हुन्ो अङ्ध र सर्वाङ्ध नग्न नभएसम्म यो काम पूरा नहुने तथ्यप्रति सबै विज्ञ छन्। यहाँ आपत्ति के मात्र हो भने तान्त्रिक र नम्रताबीच भएको सम्भोगलीलाको तस्वीर खिचियो र बाहिर ल्याइयो। समस्या केबल यति मात्र हो। अन्यथा संसारका प्रेमीप्रेमिकाले जे गर्छन् उनीहरुले पनि त्यही मात्र गरेका छन्। यौनाङ्धको आकारप्रकार र सहवासको सिलसिला कुनै रुपमा पनि अस्वाभाविक देखिंदैन।
यति स्वाभाविक विषयका लागि आज नम्रताले प्राण त्याग्ने मनस्थितिमा पुग्नुपरेको छ। उनको मेरो एउटा साथी छ प्रदर्शन नहुने स्थितिमा छभने फस्ट लभ मा अभिनय गर्नका लागि लिएको ५० हजार पेस्की रकम फर्काउनुपर्ने भएको छ। प्रेमी रेमन श्रेष्ठको प्रेम पाउन नसकिने अवस्था बनेको छभने स्पिरड उडका लागि प्राप्त भएको ब्य्राण्ड एम्बेसेडर को पद खारेजीमा परेको छ। अर्थात सम्पूर्ण मार केबल एक महिलाको थाप्लोमा मात्र आइलागेको छ। भनिन्छ, संसारमा यस्ता कुनै समस्या हुँदैनन् जसको समाधान नहोस्। यस समस्याबाट बाहिर निस्कन पनि नसकिने होइन। यसका केही समाधानहरु छन्, त्यसलाई यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ य किचमान र नम्रताले एक संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने। आफू एकआपसमा प्रेममा परेको अनुरोध गर्ने र यौनसम्बन्धको भिडियो खिच्नु भयानक भूल थियो भनेर स्वीकार गर्ने। आम पाठकश्रोतासँग विनीत भएर माफी माग्ने। य कानुनी कारवाही र सामाजिक सजायका लागि तयार रहेको स्वीकार गर्ने। अब आइन्दा यस प्रकारको भूल नगर्ने प्रतिज्ञा गर्ने।
- नम्रताका प्रेमी रेमन श्रेष्ठसँग आज पनि समझदारी हुने सम्भावना छभने उनी र नम्रता मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने जस्ामा हामी सामान्य सामाजिक जीवन बाँच्न चाहन्छौं, हामीलाई प्रेमको भीख दिनुहोस् भनेर जनतासमक्ष याचना गर्ने।
- हलुउडदेखिका चलचित्र कलाकार भयानक यौनकाण्डमा परेका छन्। बाबुछोरीबीचको असामाजिक यौनसम्बन्धपछि पनि जनताले माफी दिएका दृष्टान्त छन्। नेपालमै नायिका श्रीमतीलाई नगरवधु बनाएर बाँचिरहेका नायकहरु छन्। अन्तरमनदेखि इमानकासाथ माफी माग्ने होभने माफी पाइन्छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनलाई मोनिका प्रकरणमा हिलारी क्लिन्टनले माफी दिएको हामीले देखेकै छौं।
- सञ्चार जगतले सुषमा कार्कीले समातेको बाटो होइन माइती नेपालले अंगीकार गरेको बाटो समाउने मानसिकता लिनुपर्छ। कसैलाई दोषको सीमासम्म मात्र सजाय दिनुपर्छ, नम्रताले आत्महत्या गर्ने सीमासम्मको अपराध गरेकी होइनन्। उनलाई माफी दिन सकिन्छ।
source - dcnepal
« Reply #14 on: October 08, 2009, 05:46:21 AM »
its okey to have sex with whom namrata likes! its her life guys c can live it her way
« Reply #15 on: October 08, 2009, 11:28:14 AM »
i fully agree with Anil Pandey's article...
the MORE you Repp++ the More i POST !!
« Reply #16 on: October 09, 2009, 05:35:18 AM »
Quote from: pradman03 on October 08, 2009, 11:28:14 AM
Jai XNepali !!
« Reply #17 on: October 09, 2009, 03:35:42 PM »
pls read today's Kantipur, on namrata..
« Reply #18 on: October 09, 2009, 10:44:14 PM »
Quote from: pradman03 on October 09, 2009, 03:35:42 PM
« Reply #19 on: October 09, 2009, 11:00:33 PM »
i fulllllllllllllllllllllly agree with the article